Umdlalo weCandy Crush - Ubomi basimahla Iingcebiso zokukopela iingcebiso - Candy Crush Saga Free Khuphela Uncedo Cheats
Ulapha: Ekhaya / Ekhaya
Uyilinganisela njani impumelelo kwihlabathi lanamhlanje? Kulungile, yinto elula umntu aphumelele kuyo ukuba ugqibezela imisebenzi enzima ngaphandle kokukhathazeka. Uya kujongana neemeko ezininzi ezinobunzima. Ngaba uza kunikezela nje? Ukuba uyayenza, emva koko awunakubuva ubumnandi bempumelelo. Kulapho umdlalo we […]
Amanqanaba e-Candy Crush enzima yinto emnandi ayinguye wonke umntu oyonwabelayo. Kodwa kwabo benza njalo, siqinisekile ukuba kukho amanqanaba amaninzi apho banokonwaba khona. Nangona kukho umoya onzima kunye noxinzelelo olujikeleze loo manqanaba ahamba kunye nokukhwaza okungeyonjongo kunye nokukhala, ukubetha i-smartphone kwaye uyijonge kamva […]
Ngaba ukhe uzibuze ukuba lunzulu kangakanani ulwandle?? Mkhulu kangakanani umnyele wethu? Ingakanani indalo iphela? Kuya kubakho njani amanqanaba eCandy Crush Saga? Ndinyanisa, ayikuko nokuba sibadlulise bonke okwangoku; inyaniso, uninzi lwethu lusemva kakhulu kwisahluko sangoku. Kwicala elihle, […]
I-Candy Crush fever ayihambi naliphi na ixesha kungekudala, kwaye njengoko abantu beqhubeka befikelela kumanqanaba aphezulu, ihlombe labo lihlala likhula. Yilophu ekhohlakeleyo kodwa ngendlela eyonwabisayo. Amanqanaba anzima ayinxalenye yomdlalo, kungoko siye sayila esi siqwenga ukukunika iNqanaba leCandy Crush 1442 Cheats kunye neengcebiso! Nye […]
Sihlala sithetha ngolonwabo kodwa ukhe uzibuze ukuba ithini intsingiselo yalo ? Kungathetha nje ukucoca umqobo onamathele kuwo. Kwimeko yokutyunyuzwa kweelekese, Ukonwaba kwabasebenzisi kungasusa inqanaba elibaphazamisayo. Abadlali abaninzi bahlala bekhalaza, xa bebambeke e […]
Ngaba ucatshukiswa kukuba unamathele kwindawo enye apho ubukhona? Ngaba uvakalelwa kukuba ubomi bakho abunanjongo ukuba le njongo ayifezekanga? Ewe, abantu abaninzi ebomini banemvakalelo efanayo ukuba babambekile kwinqanaba elithile kumdlalo. Ngenxa yoko, ukufumana ulonwabo ngaphandle kokucoca a […]
Kukho abantu kweli hlabathi abathanda imingeni. Baziva bengcono kakhulu bephuma kwihlabathi elicela umngeni. Kufuneka benze iindlela zokusombulula inqanaba elintsonkothileyo. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha abasebenzisi bayaxinga. Ngokuqinisekileyo, eli lixesha apho ufuna isikhokelo esincinci ukusuka naphi na apho […]
Ngaba ukhe uzive ubomi bakho bunombala omncinci? Ngaba kukho imfuneko yokongeza imibala ebomini bakho? Ewe ukuba uziva njalo ke kwindawo yokuqala mhlawumbi awukayidlali i-candy crush. Lo ngumdlalo weelekese ezinemibala. Ezinye zazo zinemigca, ezinye zisongelwe kwaye ezinye zizodwa […]
Kwihlabathi lanamhlanje elixakekileyo, kufuneka sizifumanele amaxesha nje ngokwethu, amaxesha enza ubomi bufanele ukuphila, Amaxesha asinceda sihlale sisempilweni kolu mnyama luxakekileyo esilubiza ngokuba bubomi. Kwakhona, kufuneka size neyona ndlela yokubalekela ilula kuwe kwisaga yeCandy Crush Jelly. Malunga nohambo lweCandy Crush […]
Ngaba usakholelwa ukuba abanye abantu bacwangcisa imidlalo yevidiyo kuphela? Ndinje yile inene? Ngaba nina bafana nihlala kwinkulungwane ye-19 okanye yintoni? Kutheni le nto kungafanelekanga ukuba sinxibelelane nabahlobo bethu xa yonke into ixhunyiwe kwihlabathi lanamhlanje? Ngaba sinalo ixesha lokuhlala nabo ngalo lonke ixesha? Hayi ncma, […]
Igqityelwe ukuhlaziya EyeKhala 16, 2021 Ngu Isobella Franks Shiya uluvo
Igqityelwe ukuhlaziya EyeThupha 10, 2021 Ngu Isobella Franks Shiya uluvo
Igqityelwe ukuhlaziya EyeThupha 4, 2021 Ngu Isobella Franks Shiya uluvo
Igqityelwe ukuhlaziya EyeNkanga 11, 2021 Ngu Isobella Franks Shiya uluvo
Iphepha Elilandelayo »